ô.cc – घर
यूआरएल छोटो छाना गुमनाम
. 1 घण्टा1 दिन1 हप्ता1 महिना1 बर्ष
व्यक्ति द्वारा मानिसका लागि निर्मित
ô.cc एक अज्ञात URL छोटो पार्ने पुनःनिर्देशक हो। तपाईका लिंकहरू सजिलैसँग डेरिफर गर्नुहोस्, यसलाई आफ्नै अनुप्रयोगमा एकीकृत गर्नुहोस्। कुनै तथ्या ,्क छैन, कुनै लग छैन। तपाईको गोपनीयता सुरक्षित छ।
मलाई किन अज्ञात राख्नु पर्छ र मेरो URL छोटो पार्नु पर्छ?
ô.cc तपाइँको गोपनीयता प्रदान गर्न को लागी खाली रेफरर (डेरेफर) तपाइँ द्वारा प्रदान सबै लिंक को लागी प्रयोग गरीन्छ। साथै, यसले तपाईंको लिंकहरू छोटो पार्छ, सोशल मिडिया र कुनै अन्य साझा मञ्चमा साझेदारी गर्न सजिलो बनाउँदछ। तपाईं आफ्नै url लाई अनुकूलित गर्न र म्याद समाप्ति समय निर्दिष्ट गर्न सक्षम हुनुहुन्छ। किनकि यसले लि you्कहरू मात्र भण्डारण गर्दछ जुन तपाईं पुनःनिर्देशित गर्न चाहानुहुन्छ, यो तपाईंलाई नि: शुल्क युआरएलहरू छोट्याउनको लागि अनुमति दिन्छ।
डेरेफर भनेको के हो?
एक डेरेफर एक वेबपेजबाट प्रयोगकर्तालाई एक विशिष्ट यूआरएलमा रिडिभर गर्ने एक टेक्निक हो। सामान्यतया, वेब ब्राउजरले सूचनाहरू पठाउँछन् (रेफर सहित:) जब तपाईलाई अर्को पृष्ठमा पुनः निर्देशित गरिन्छ। डेरेफरको भूमिका त्यो जानकारीलाई लिंक गरिएको वेबसाइटमा लुकाउने / हटाउने हो। यदि एक वेबमास्टरले आफ्नो वेबसाइटको लगहरूको विश्लेषण गर्न चाहन्छ भने, यसले मूल यूआरएलको सट्टा डेरेफरको यूआरएल प्रदर्शन गर्दछ।
कसरी प्रयोग गर्ने?
1. तपाईंको URL लाई इनपुटमा टाँस्नुहोस् वा लेख्नुहोस्।
2. कस्टम नाम प्रविष्ट गर्नुहोस् (वैकल्पिक)।
3. कस्टम म्याद समाप्त हुने मिति प्रविष्ट गर्नुहोस् (वैकल्पिक)।
4. छोटो क्लिक गर्नुहोस्।
तपाईं एक नयाँ यूआरएल प्राप्त गर्नुहुनेछ जुन तपाईं साझा र प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ!
यसलाई मेरो अनुप्रयोगमा कसरी एकीकृत गर्ने?
केवल यूआरएल https: //ô.cc/ प्रयोग गर्नुहोस्? र यसमा तपाइँको मूल यूआरएल थप गर्नुहोस्।
कसरी छिटो यूआरएल छिटो छिटो?
तपाईं छोटो बनाउन सक्नुहुन्छ र तपाईको यूआरएल साँच्चिकै छिटो बेनामी गर्न सक्नुहुन्छ र यो एकदम सजिलो छ।
- तपाइँ तपाइँको मनपर्ने मा निम्न बुकमार्केट जोड्नुहोस्।
- तपाइँ छोटो बनाउन चाहानुभएको वेबसाइटमा नेभिगेट गर्नुहोस्
- तपाईंले सिर्जना गरेको ô.cc मनपर्नेमा क्लिक गर्नुहोस्
- त्यसो भए!
तपाईको उपकरणपट्टीमा हाम्रो बुकमार्कलाई ड्र्याग र ड्रप गर्नुहोस् स्वचालित रूपमा छोटो यूआरएल उत्पन्न गर्न तपाई एक साधारण माउस क्लिकको साथ नेभिगेट गर्दा।
किन तपाईंले लिंकहरू छोट्याउन र अज्ञात राख्नु पर्छ?
शब्द यूआरएल छोटो गरीरहेको छ हाम्रो लामो समय को लागी। हामी अस्तित्व महसुस गर्न सक्दैनौं। तर यो इन्टरनेट मा लगभग जताततै छ। छोटो लिंकको लागि सब भन्दा पहिलेको कारण यो हो कि ईन्टरनेटमा वेबसाइटको खोजीमा रहेका मानिसहरूका लागि सम्झन यो सजिलो हुन्छ। मानौं तपाइँसँग तपाइँको वेबसाइट को लिंक छ वा तपाइँको वेबसाइट को सामग्री को लागी URL को लागी URL को लागी धेरै ठुलो छ र यो मौखिक रुपमा भन्न सकिदैन।
मान्नुहोस् https://example.com/5dc1apgeniune तपाईले यस्तो प्रकारको URL देख्नु भएको हुन सक्छ जब तपाईले आफ्नो उपकरणको क्लिपबोर्डमा लि cop्कको प्रतिलिपि प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईले पहिल्यै याद गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाई कसैलाई औपचारिक सन्देशमा लिंक बताउन सक्षम हुनुहुन्न।
जसले लिंकको प्रचारमा मार्केटिंगको पहिलो चरणबाट तपाईंलाई रोक्दछ। र यो यूआरएल शोर्टनरको बिल्कुलै मेरो आधारभूत कारण हो कि तपाईं मौखिक मैत्री हुने र पढ्न सजिलो लिंक पनि पाउनुहुनेछ जुन तपाईं सजिलैसँग टाइप गर्न सक्नुहुनेछ र सजिलै साझेदारी गर्न सक्नुहुनेछ। वर्दी स्रोत लोकेटर यूआरएल को रूपमा पनि चिनिन्छ विश्वव्यापी वेबमा एक विशिष्ट सामग्रीको लागि भौतिक रूपमा गन्तव्य हो।
यूआरएल छोटो पार्ने प्रक्रियाले यस तरिकाले काम गर्दछ कि यो लिंकमा क्यारेक्टरहरूको संख्या घटाउन सक्षम छ तर अझै प्रयोगकर्ताहरूलाई त्यो समान सामग्री तिर मार्गदर्शन गर्नका लागि अझै सक्षम छ।
जब तपाइँको अगाडि ठूलो यूआरएल प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ तपाइँलाई पूरै अंश सम्झन यो एकदम कठिन छ। यस अवस्थामा एक यूआरएल शॉर्टनरले तपाइँलाई यूआरएलमा क्यारेक्टरहरू घटाउनको लागि काम गर्दछ तर अझै तपाइँलाई समान सामग्रीतर्फ पुनःनिर्देशित गर्नको लागि सक्षम बनाउँदछ।
त्यसो गरेर तपाईं अघि URL लाई अझ रमाइलो गठन को लागी जाँदै हुनुहुन्छ जुन सम्झन सजिलो र टाइप गर्न र साझेदारी गर्न सजिलो हुन गइरहेको छ। URL छोटो पार्ने सतहमा धेरै वेबसाइटहरू वा धेरै वेब पृष्ठहरू एकल यूआरएलमा लि for्क गर्ने क्षमता पनि छ।
यूआरएल छोटो पार्नुको मुख्य कारण यो हो कि यो एकदम सफा देखिन्छ र यो सजिलो छ र कुनै प्रकारको गल्ती बिना यो सीधा सन्देश सेवाहरू मार्फत साझेदारी गर्न सक्षम हुन सक्छ। यससँग स्थान र डेटा संरक्षण गर्न र यसले कुनै पनि प्रकारको हानिकारक पहुँचको लागि पशुहरू बनाउनका लागि सुरक्षा सुविधाहरू पनि समावेश गर्दछ। यूआरएल छोटो पार्नाले इन्टरनेटमा सर्च इन्जिन अनुकूलन मैत्री सामग्री सिर्जना गर्न सजिलो बनाउँदछ।
मानौं तपाईंसँग एक ब्लग साइट छ जहाँ तपाईं बिभिन्न सेवाहरूको लागि विज्ञापन सिर्जना गर्दै हुनुहुन्छ जहाँ तपाईं विभिन्न लिंकहरू साझेदारी गर्न जाँदै हुनुहुन्छ। एक यूआरएल छोटो गरी तपाईं सजीलै यूआरएलको छोटो र संस्करणहरू प्रदान गर्न सक्नुहुनेछ र तिनीहरूलाई मुख्य कुञ्जीमा थप्न सक्नुहुन्छ ताकि व्यक्ति सजिलैसँग सामग्री पत्ता लगाउन सक्षम हुन्छन् र यसलाई सजिलै गुगल एनालिटिक्समा पनि क्रमबद्ध गर्न सकिन्छ।
लि links्क साझेदारी गर्न को लागी यो सजिलो बनाउँछ प्रयोगकर्ताहरू हिज्जेसँग कुराकानी गर्न सजीलो हुन्छ र तिनीहरूलाई सजिलो सम्झन। URL छोटो पार्ने सेवाले तपाईंको वेबसाइटको ग्राहकहरूको विश्वासलाई पनि सहयोग गर्दछ। मुख्य कारण यो हो कि यूआरएल छोटो गरेर तपाईंसँग एक पढ्ने मिल्ने यूआरएल पाउनु हुन्छ जुन अनलाइन सामग्रीको पढ्न योग्यता परिक्षणको साथ पनि गइरहेको छ। र जब यो सबफोल्डर्स वा प्रकाशनहरूको बारेमा हुन्छ तपाईसँग आफ्नो लि link्क सकेसम्म सफा गर्ने अवसर पनि प्राप्त गर्न सक्दछ ता कि यो सम्भावित ग्राहकहरू तर्फ बढी भरपर्दो देख्न सकिन्छ।
अज्ञात यूआरएल छोटो पार्दै
यस प्रकारको यूआरएल मूल रूपमा एक हो जुन तपाइँ तपाइँको सही विवरण वा सर्वेक्षण लिने व्यक्तिको विवरण ट्र्याक बिना तपाइँको वेबसाइटको सर्वेक्षण सेवा प्रदान गर्न प्रयोग गर्नुभयो। त्यस्तै प्रकारको हाइपरलिंक ईमेलमा वा तपाईंको वेबसाइटको पप-अप विन्डोमा वा ल्यान्डि page पृष्ठमा सजिलैसँग टाँस्न सकिन्छ। अज्ञात यूआरएल प्रयोग गर्नाले वेबसाइटको मालिकलाई वेबसाइटको एक सुरक्षित र गोपनीयता मैत्री लिंक प्रदान गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ जसले प्रयोगकर्ताहरू सामग्रीको सर्वेक्षण लिन र वेबसाइटको समग्र गुणस्तर सजिलैसँग निर्धारण गर्न सक्षम हुन्छन्।
र यसले मूल रूपमा इन्टरनेट को धेरै अन्य हानिकारक सामग्री को कुनै पनि प्रकार बाट मद्दत गर्दछ। जस्तै जब तपाइँ कुनै प्रकारको प्रमोटन्ट सामग्रीको बारेमा तपाइँको वेबसाइटको सम्पूर्ण लिंकमा टाँस्दै हुनुहुन्छ भने धेरै सम्भावना हुन्छ तपाइँको सामग्री र विश्वव्यापी वेबमा तपाइँको सामग्रीको सही स्थान सजीलै पत्ता लगाउन सकिन्छ र यो पनि यो विषय हुन सक्दछ। शब्द हानिकारक कार्यहरू। जबकि अर्कोतर्फ अज्ञात र छोटो र वास्तविक यूआरएलको संस्करण प्रयोग गरेर तपाईंलाई गोपनीयताको त्यो अतिरिक्त तह प्रदान गर्न गइरहेको छ र साथै यसले तपाईंको सामग्रीलाई महत्त्वपूर्ण हदसम्म सुरक्षा गर्न मद्दत गर्दछ।
यो ती व्यक्तिहरूको लागि उत्तम हो जुन स्थापना र तयार गर्न इच्छुक छन् प्रमोशनल सामग्री रिडाइरेक्ट। त्यहाँ धेरै यूआरएल छोटो सेवाहरू ईन्टरनेटमा छन् जुन तपाईंको यूआरएल अज्ञात बनाउन र पढ्न मिल्छ मित्रवत बनाउन सक्षम छ।
युआरएल छोटो बनाउनको लागि विधिहरूले मूल रूपमा http पुनर्निर्देशनको प्राविधिक अनुसरण गर्दछ। यो छोटो बनाउन र वेब लिंक वा अज्ञात आईपी ठेगानाको गुमनाम फारमको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो विधिले सजिलैसँग छोटो र तल सजिलै बदल्न सक्दछ र लामो URL को केही चरित्रहरू प्रतिस्थापन गर्दछ र यसलाई छोटो र संस्करण बनाउनको लागि सक्षम छ वर्ल्ड वाइड वेबको सहि उही स्थान कायम गर्दछ।
© 2022 ô.cc • All Rights Reservedसम्पर्कगोपनीयता नीति